Ny alahady taorian’izay dia tsy maintsy nampidirina hopitaly haingana tany Toamasina satria samy sempotra izy mianaka. Efa nahitana soritr’aretina avokoa araka izany izy ireo, antony nanosika ireo tompon’andraikitra rehetra any amin’ity distrika iray ity nandray fepetra. Nakatona nanomboka omaly avokoa araka izany ny sekoly rehetra ao Sainte Marie na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana. Tsy misy mahazo mandeha mivavaka intsony ihany koa manomboka amin’ny Alahady ho avy izao ny mpino rehetra, ho fitandroana ny fahasalaman’ny mponina. Mihatra ihany koa ny “couvre feu” izay manomboka amin’ny 06 ora hariva ka hatramin’ny 04 ora maraina. Mikasika an’i Mahajanga manokana moa dia fantatra ihany koa fa olona 3 no mitondra ny tsimok’aretina COVID 19 any an-toerana ary efa noraisina daholo ihany koa ny fepetra mifandraika amin’izany.